AdraInformatica - နည်းပညာ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဆော့ဝဲ၊ လမ်းညွှန်နှင့်အက်ပ်များ
နည်းပညာ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဆော့ဝဲ၊ လမ်းညွှန်နှင့်အက်ပ်များ
သြဂုတ်လ 23, 2021 ရက်တွင် Posted
ဗီဒီယိုဂိမ်း Bayonetta3အတွက်လမ်းညွှန်
Bayonetta3သည်ကျော်ကြားသောစုန်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားသောကျော်ကြားသော hack and slash saga ၏ PlatinumGames မှတတိယမြောက်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းကို Nintendo Switch, Nintendo console အတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ဒီဂိမ်းက Bayonetta3ပရိသတ်တွေအတွက်အထူးအကြံပြုထားတဲ့ video game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အခါတိုင်းက၎င်း၏နောက်လိုက်အကြားပိုပြီးအသိအမှတ်ပြုဖြစ်လာသည် စမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေပါ။ Bayonetta3ကစားခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ဟုလူသိများသည်။
အောက်ပါလမ်းညွှန်တွင် Bayonetta3ကိုစတင်ကစားခြင်းသည်သင့်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေမည့်အချက်အလက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်မင်းကကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မလာနိုင်ပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့အခြေခံကိုသင်လေ့လာလိမ့်မယ်။
ဘယ်အချိန်မှာဒီဂိမ်းရဲ့ Premiere ရှိပါသလဲ
၏ပရိသတ်များအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်ရက်စွဲတစ်ခုဖြစ်သည် Bayonetta3es ဖြန့်ချိသည့်ရက်ဤအချိန်၌ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ရနိုင်သည် console များ - ရရှိနိုင်ပါသည်မရ။ အလိုချင်ဆုံးအရာတစ်ခုမှာ၎င်းရရှိနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများနှင့်အောက်ပါလူထုအားအံ့အားသင့်စေမည့်သတင်းများကိုသိရန်ဖြစ်သည်။
Bayonetta3တွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်ရန်အချက်များ
ဒါကြောင့်ဖော်ပြခြင်းစတင်ရန်သင့်လျော်သည် Bayonetta3သည်သင့်လက်၌ရှိနေသောအခါသင့်အတွက်အသုံးဝင်မည့်လှည့်ကွက်များ, သင်အများကြီးပိုကောင်းရလဒ်များကိုနှင့်အတူဂိမ်းများကိုရ။ ဤရွေ့ကားအချို့။
အတွေ့အကြုံရယူပြီးသင်၏အဆင့်ကိုမြှင့်ပါ။ တိုးတက်ခြင်းနှင့်ရပ်ခြင်းကသင့်ကိုအခွင့်အလမ်းပိုပေးလိမ့်မယ်၊ ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေထက်အားသာချက်တစ်ခုရလိမ့်မယ်။ ဒါကမင်းတက်သွားပြီးမင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်နိုင်ချေတွေ၊ မင်းရဲ့အရည်အချင်းတွေကိုတိုးတက်စေလိမ့်မယ်။
Bayonetta3တွင်မည်သည့်အရာကိုရှာပါ။ သတင်းအချက်အလက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့လက်နက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ပြဿနာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးမြန်မြန်ကျော်လွှားဖြေရှင်းဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗွီဒီယိုဂိမ်းကမင်းရဲ့လက်ထဲရောက်တဲ့အရာတွေဘဲဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါ။
နည်းဗျူဟာအသစ်များချမှတ်ရန် သငျသညျတစျခုတည်ဆောက်ခဲ့ကြရင်တောင် နည်းဗျူဟာ သင်အဆင်ပြေသောအရာနှင့်အသစ်သောအရာများအားစမ်းသပ်ခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်သင့်အားတိုးတက်စေမည့်အသုံးဝင်သောနည်းစနစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုပေးသည်။
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ မင်းအတွက်ကစားရတာပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့အတွက်ပြတ်သားမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သင်ပြင်ဆင်နိုင်သောအရာအားလုံးကိုပြောင်းပါ။ ထိန်းချုပ်မှုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏ရလဒ်များပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဂိမ်းကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ခွင့်ပြုသည်။
Bayonetta3ကိုသင်စမ်းနိုင်သောပလက်ဖောင်းများ
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဗီဒီယိုဂိမ်း အမျိုးမျိုးသော consoles စနှင့် PC ပေါ်တွင်ကစားနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ဖြန့်ချိမည့်ဗားရှင်းအားစမ်းသပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဆင်ခြေမရှိချေ။ ၎င်းကို console တွင်ကစားရန်ရရှိနိုင်မည့်အခြားနည်းလမ်းအချို့သည်ဖြစ်လိမ့်မည် PlayStation y Xboxသင်သည်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် အခြားကစားသမားများနှင့်ကစားပါ သို့မဟုတ်သင်ကစားလိုလျှင်ဒေသအလိုက်ကစားပါ။
တူညီသောလမ်းအတွက်ကြောင့်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် တိမ်တိုက်ထဲမှာကစား PC အတွက် Steam နှင့် Stadia ကဲ့သို့ပလက်ဖောင်းများမှတဆင့် ၎င်းတို့ကို သုံး၍ စျေးကွက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် console (သို့) ထူးခြားသောကွန်ပျူတာရှိရန်မလိုပါ စူပါပျော်စရာဂိမ်းများကိုရှိသည်.
သူ့ရဲ့ဖန်တီးသူတွေရှာနေတာကလူတွေတတ်နိုင်သလောက် Bayonetta3ကိုသုံးခွင့်ရှိတယ် ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအတွက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည် ကစားရန်မည်သည့်အရာသည်ရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာကောင်းမည်နည်း၊ အားလုံးသည်သင်၏အရသာပေါ်မူတည်သည်။
သင်လိုချင်သောဗားရှင်းအားလုံးကို ၀ ယ် ယူ၍ မရပါကစိတ်မပူပါနဲ့၊ ဗားရှင်းအားလုံးမှာဖျော်ဖြေမှုများစွာရှိသည်၊ သင်ပျော်လိမ့်မည်ဟုအာမခံသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အုပ်စုများအတွက်နှစ် ဦး စလုံးထူးခြားတဲ့ဂိမ်း.
Bayonetta3ရယူရန်သင်ဆန္ဒရှိပါသလား။ ဒီမှာမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေ
သငျသညျဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတွေပါလျှင် bayonetta ၃ ကိုရယူပါသင်သည်သင်၏လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည် အကြိုက်ဆုံးစတိုးဆိုင်သင်အမြဲသွားသောနေရာသို့ ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရောက်လာပြီးနောက်၎င်းကိုရနိုင်သောစျေးနှုန်းချိုသာသောရနိုင်သော console များအားလုံး၌သင်ရှာနိုင်သည်။
ဤသည်နှင့်အတူဘာမှထက်သာမန်ထက်ပိုပါတယ် consoles စများအတွက်ဂိမ်းများ PlayStation သို့မဟုတ် Xbox ကဲ့သို့ သူတို့၏ကစားသူများသည်အလွန်အေးချမ်းပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားသော console များ ဂိမ်းများ၏မူရင်းဗားရှင်း.
သင်အိမ်မှမထွက်ခွာချင်လျှင်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ online shopping ဖြစ်သည်။ သင်သူတို့ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ် အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းစတိုးများသို့မဟုတ် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများရိုးရှင်းသောနှင့်အာမခံထားလမ်းအတွက်။
Si ဒီအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်စျေးဝယ်သင်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသက်သာစေပြီးသင်၏အမိန့်သည်သင်၏အိမ်တံခါးသို့ရောက်လာလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်သင်က virtual version ကိုတောင်းခံနိုင်သည်၊ ၎င်းကို download လုပ်ပြီးသင်၏ console တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
Stadia (သို့) Steam ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများသည်လည်းငွေပေးချေမှုကိုပေးချေပြီးသောအခါသူတို့၏ဆာဗာများကို သုံး၍ ပျော်မွေ့နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်စာရင်းပေးသွင်းမှုအောက်တွင်သင်ကစားနိုင်သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းခြင်းသည်ကာလတိုတွင်ဆိုလိုသည် သေးငယ် outlay မူလဂိမ်းတစ်ခုကို ၀ ယ်ခြင်းထက်၎င်းသည်သင်အားအချိန်အကန့်အသတ်များစွာဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းများကစားရန်ခွင့်ပြုသည်။
Bayonetta3ကစားရန်လေ့လာပါ
ထိုစကားထက် ပို၍ သေချာသောအရာမရှိပါ အလေ့အကျင့်မာစတာစေသည်ပြီးတော့တစ်ခုခုမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအဲဒါကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဘဲ။ သင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လေလေ၊ သင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာလေဖြစ်သည်။
ဂိမ်းတွေမှာလည်းဒီလိုပါပဲ။ သင်၌ဝါရင့်လေလေ၊ သင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနှင့် ဦး နှောက်ပိုရှိလေဖြစ်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောမဟာဗျူဟာများတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်။ ဒီတော့မင်းရှာနေတဲ့ဟာဆိုရင် Bayonetta3ကစားရန်သင်ယူပါ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးမကြာခဏလေ့ကျင့်ပါ။
အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ် သင်၏ရန်သူနှင့်တွေ့ခြင်းငှါ၊မရ။ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ သူတို့ရဲ့နည်းဗျူဟာတွေ၊ နည်းစနစ်တွေ။ သူတို့ကိုနားလည်ဖို့သူတို့ကိုသေသေချာချာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့ကိုအနိုင်ယူရန်သင့်အတွက်အသုံးဝင်မည့်အရာများဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတာသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်လိုအပ်သည် သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏အပြုအမူကိုငါသိ၏မရ။ သူတို့က NPCs တွေ၊ ကစားသမားအစစ်အမှန်တွေဘဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကမင်းသူတို့ကိုသိရင်သူတို့ကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုချေမှုန်းပစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်။
သို့သော်စောင့်ပါ၊ မေးခွန်းသည်ပြိုင်ဘက်နှင့်မပြီးပါ။ မင်းကအရမ်းသန်မာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လိမ့်မယ်၊ မင်းကမင်းကိုမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရန်သူဖြစ်အောင်နည်းလမ်းကောင်းနဲ့လုပ်လိမ့်မယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်နည်းဗျူဟာများကိုစဉ်းစားပါ နှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုကောင်းဖို့အလုပ်လုပ်တယ်။ သင်အမြဲပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်။
သောအတွက်ယခုအချိန်တွင် သင်အခြားပြိုင်ဘက်လေ့လာပါ သူတို့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုသင်ရှာနိုင်တယ်။ မင်းလုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာကမင်းကိုကူညီတဲ့အရာအားလုံးကိုယူတာ၊ အဲဒါကသူတို့ရဲ့ဗျူဟာတွေကိုတူတူလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ဆီကနေသင်ယူတာနဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်တွေထည့်တာနဲ့ပတ်သက်တာဘဲ။
နောက်ဆုံးတွင်နည်းဗျူဟာများချမှတ်ပါ၊ အေးအေးဆေးဆေးကစားပါ၊ အမြဲတမ်းပွင့်လင်းမြင်သာစွာကစားပါ။ ဤအရာသည်အကောင်းဆုံး Bayonetta3ကစားသမားဖြစ်လာရန်အဓိကနေရာများဖြစ်သည်။ ဤအချက်များကိုလိုက်နာပါကသင်ပိုမိုနီးကပ်လာသည်နှင့်ပိုနီးလာလိမ့်မည်။ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာသည်.
သြဂုတ်လ 13, 2021 ရက်တွင် Posted
Elden Ring ကိုစတင်တီးခတ်ရန်သင်သိလိုသည့်အချက်အလက်အားလုံး
Elden Ring သည်ကစားနည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် နောက်လိုက်များထပ်ထည့်သည်မရ။ ကစားသမား၏ပါဝင်အားဖြည့်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနည်းလမ်းသည်၎င်း၏နောက်လိုက်များကိုပိုမိုသစ္စာရှိစေပြီးအဆုံးသတ်မခံစားရသေးသူများက၎င်းကိုကစားစေလိုသည်။
Elden Ring ကိုစတင်စမ်းသပ်မည့်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေသောအချက်အချို့ပါသောဤပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ ဤအချက်အလက်များဖြင့်သင်သည်လုံး ၀ စိတ်ရှုပ်ခြင်းမရှိဘဲကစားရန်သင်ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုပိုမိုရှင်းလင်းသောအမြင်အာရုံကိုရနိုင်သည်။
၏နောက်လိုက် Elden Ring ကို သူတို့ဟာမကြာမီမှာကစားရမယ့်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ် ဖြန့်ချိသည့်ရက်သူတို့ကစားနိုင်သည့် console များ - ရရှိနိုင်ပါသည်မရ။ အလွန်ကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်အတူဗီဒီယိုဂိမ်းသည်ရောက်ရှိလာခြင်းသည်၎င်းနှင့်အတူပါလာမည့်အရာသစ်အားလုံးကိုပျော်မွေ့ရန်တောင့်တသည်။
ဒါဟာအစကိုမှတ်မိဖို့စတင်ထိ သင့်အားကူညီရန်အကြံပေးချက်များ၊ Elden Ring သည်သင့်လက်၌ရှိသည်, သင်ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဂိမ်းများကိုရနိုင်သည်။ သင့်အတွက်အချို့ရှိပါသည်။
အတွေ့အကြုံရယူပြီးအဆင့်တက်ပါ။ တိုးတက်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းကမင်းကိုအခွင့်အလမ်းပိုပေးလိမ့်မယ်၊ မင်းကကျန်တဲ့ကစားသမားတွေထက်အားသာချက်ရှိလိမ့်မယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်တက်သွားပြီးသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုများအပြင်သင်၏ဇာတ်ကောင်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်။
Elden Ring မှာဘာတွေပါလဲရှာကြည့်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့လက်နက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဗွီဒီယိုဂိမ်းကပြသနာတွေကိုမြန်မြန်ဖြေရှင်းဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတာကိုသတိရပါ
ကစားရန်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။ တခါတရံ ကစားနည်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရွေးချယ်မှုအသစ်တွေကိုကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။
သင်လိုအပ်သည့်ချိန်ညှိချက်များပြုလုပ်ပါ။ ဂိမ်းဆက်တင်များတွင်သင်လုပ်နိုင်သောအပြောင်းအလဲများကိုပြုလုပ်ခြင်းသည်ဂိမ်းကစားနေစဉ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချို့မှာဖန်သားပြင်၊ အသံ၊ ထိန်းချုပ်မှုများ (သို့) ပိုကောင်းအောင်ကစားနိုင်သည့်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုဖြစ်နိုင်သည်။
Elden Ring ကိုအွန်လိုင်းမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကစားနိုင်လဲ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ သင်ဂိမ်းကိုအမျိုးမျိုးသောဂိမ်းစက်များနှင့်ကွန်ပျူတာတွင်ကစားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဖြန့်ချိမည့်ဗားရှင်းကိုကြိုးစားခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိချေ။ ၎င်းကို console တွင်ခံစားနိုင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာအချို့သည် PlayStation y Xbox, သောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ ကျန်ကစားသမားများနှင့်ကစားပါ သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကအိမ်၌ဂိမ်းကစားပါ။
၏အဓိကရည်ရွယ်ချက် ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းဖွင့်ပါ ဗီဒီယိုဂိမ်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးသောပရိသတ်ကိုလက်လှမ်းမီရန်စီမံပြီးအခြားကစားသမားများနှင့်မျှဝေခြင်းသည်လွယ်ကူပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။ မင်းရဲ့အရသာအရ၊ Elden Ring ကကမ်းလှမ်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေထဲကတစ်ခုခုကိုရွေးဖို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ၊ ဗားရှင်းအားလုံးသည်ရယ်စရာကောင်းပြီးဖြစ်နိုင်ချေကိုပေးသည် တစ် ဦး ချင်းနှင့်အုပ်စုလိုက်တွင်အလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ.
ဤလမ်းကြောင်းများကြောင့် Elden Ring ကိုသင်ရနိုင်သည်
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Elden Ring ကိုဝယ်ပါ မင်းတိုက်ခန်းနဲ့အနီးဆုံးဆိုင်ဒါမှမဟုတ်မင်းအမြဲသွားလေ့ရှိတဲ့ဆိုင်ကိုသွားရမယ်။ သင်၏ဂိမ်းဖြန့်ချိသည့်နေ့ပြီးနောက်၊ နောက်ရက်များ၌၎င်းကို၎င်း၏ပလက်ဖောင်းများအားလုံးတွင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အားလုံးအဘို့ အစစ်အမှန် gamers, ရှိသည်ဖို့အမြဲသာ။ ကောင်း၏ ဗီဒီယိုဂိမ်း၏မူရင်းဗားရှင်းမရ။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများဖန်တီးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ franchise ကြီးများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
ဒါပေမယ့်မင်းကအဲဒါကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုတွေမှာနေရာချထားရုံတင်မကဘဲအဲဒါကိုပါ ၀ ယ်နိုင်လိမ့်မယ် အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းစတိုးများ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများ အကောင့်တစ်ခုတည်းဖြင့်သာသင် ၀ ယ်နိုင်လိမ့်မည်။
Si သင်ဤအွန်လိုင်းစတိုးများတွင်ဝယ်သင်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသက်သာစေပြီးသင်၏အမိန့်သည်သင်၏တံခါးသို့ရောက်လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်သင်သည် virtual version ကို ၀ ယ် ယူ၍ ၎င်းကို download လုပ်ပြီးသင်၏ console တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဗီဒီယိုဂိမ်းစတိုးဆိုင်များအပြင်၊ စာရင်းပေးသွင်းမှုအထုပ်တစ်ခုငှားရမ်းခြင်းဖြင့်ကစားရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ကဂိမ်းတစ်ခုကို ၀ ယ်ယူခြင်းမဟုတ်ဘဲအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးကိုသုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအရာသည် Stadia သို့မဟုတ် Steam ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ဒီပလက်ဖောင်းတွေအကြောင်းအကောင်းဆုံးကတော့သူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းပါ။ ကြေးပေးသွင်းသည် အများကြီးစျေးသက်သာ ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု ၀ ယ်ခြင်းထက်၎င်းသည်ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံသို့ ၀ င်ရောက်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
Elden Ring မှာဘယ်လိုပိုကြီးမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အခြားဒေသများ၌ယခင်အတွေ့အကြုံမည်သို့ပင်ရှိပါစေကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံသစ်ရှိသူတိုင်းကို အစပြု၍ အစမှအစသည်အမြဲအတွေ့အကြုံသစ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ခြင်းဖြင့်စိတ်အပန်းဖြေခြင်းဖြင့်သင်အထူးကုတစ် ဦး ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ငါတို့ပြောပြီးသားအတိုင်းမင်းကကောင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာအားလုံးကိုလေ့ကျင့်သင့်တယ်။ ဒီတစ်ခါဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ သင်လေ့ကျင့်လေလေသင်ပိုလုပ်နိုင်လေဖြစ်သည် Elden Ring ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေ့လာပါ။ အကယ်၍ သင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၊ အကောင်းဆုံး Elden Ring ကစားသမားပါထို့နောက်သင်စတင်လေ့ကျင့်ရန်အကြံပေးလိုသည်။
အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ် သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေ့ဆုံရန်မရ။ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံ၊ သူတို့ရဲ့နည်းဗျူဟာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေ။ ဤအတွက်သင်သည်သူတို့ကိုအလွန်ဂရုတစိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့ကိုအနိုင်ယူရန်အလွန်အသုံးဝင်မည့်သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်များဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတာသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မင်းအကျိုးရှိတာကိုယူပြီးမကောင်းတာကိုသုံးပါ။ သင်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပါက၎င်းတို့ကိုသင်အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သူတို့က NPC တွေလား၊ တကယ့်ကစားသမားတွေလား၊ သူတို့အားလုံးကသူတို့ကိုသင်သိလျှင်သူတို့ကိုအလွယ်တကူအနိုင်ယူနိုင်ပုံကိုသင်ထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်စောင့်ပါ၊ ကိစ္စကပြိုင်ဘက်နဲ့မပြီးဘူး။ မင်းကအရမ်းသန်မာတဲ့အမှတ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်၊ ဒါဆိုရင်မင်းကမင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်နည်းဗျူဟာများကိုလေ့လာပါ နေ့တိုင်းပိုကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ပါ။ သင်အမြဲတိုးတက်စေနိုင်သည်။
အပြင် သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏အားနည်းချက်များကိုရှာပါသူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်သင်သွားရာလမ်းတိုင်း၌မည်သည့်အရာအတွက်သောက်ရန်ကိုခွဲခြားရန်လိုသည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအခြားကစားသမားတွေအတွက်ဘယ်လိုရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးမင်းရဲ့ကစားဟန်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတာဟာမကောင်းပါဘူး။
နောက်ဆုံးတွင်စိတ်အေးအေးထားပါ၊ ကြမ်းတမ်းစွာလုပ်ဆောင်ပါ၊ မလုပ်ဆောင်ပါနှင့်ကောင်းမွန်သောနည်းဗျူဟာကိုအဆိုပြုခြင်းသည်သင့်အားမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးရလဒ်ကောင်းများကိုရစေသည်။ သင်ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာနိုင်လျှင်သင်ဖြစ်နိုင်သည် Elden Ring တွင်အကောင်းဆုံး.
သြဂုတ်လ 5, 2021 ရက်တွင် Posted
သောဂိမ်းတစ်ခုမှာ ပိုပြီးပရိသတ်တွေလာပြီဖြစ်ပါတယ် အရှိန်အဟုန်ပိုယူခြင်းသည် Beyond Good & Evil2ဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်းကမင်းကအသစ်လား၊ အရင်ကကစားဖူးလား။
ယခု၊ ဤလမ်းညွှန်၌ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသောအချက်အလက်များသည်သင်ကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှု ၂ ကိုကျော်။ ကစားခြင်းနှင့်အားသာချက်အချို့ရယူလိုလျှင်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားအောက်တွင်သင်ပေးမည့်အကြံဥာဏ်ဖြင့်သင်သည်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်မလာနိုင်သော်လည်းသင်ကူညီမည့်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်များရလိမ့်မည်။
Beyond Good & Evil2၏ပွဲ ဦး ထွက်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သနည်း။
ဒါဟာပြီးသားကြောင်းထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကောင်းသော & ဘေးဥပဒ်2ဖြစ်ရမယ် ဖြန့်ချိသည့်ရက်ဤအချိန်မှ စ၍ သူ၏နောက်လိုက်များသည်မကစားနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းသစ်ကိုသိနိုင်မည့်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့သည်။ console များ - ရရှိနိုင်ပါသည်.
Beyond Good & Evil2တွင်ပေါ်လွင်စေမည့်နည်းလမ်းများ
ဒါကြောင့်ဖော်ပြခြင်းစတင်ရန်ကောင်းပေသည် Beyond Good & Evil2သည်သင်၏လက်၌ရှိသောအခါ၊ သင့်အားကူညီရန်အကြံပေးချက်များအများကြီးပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ဂိမ်းကစားပါ။ သင့်အတွက်အချို့ရှိပါသည်။
ကျင့်သုံးပြီးသင်၏အဆင့်ကိုမြှင့်ပါ။ မင်းရဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပြီးပိုမြင့်တဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းမင်းကပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ဂိမ်း၌တက်ခြင်းသည်သင်၏ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီမည့်ကိရိယာများကိုဖွင့်ပေးသည်။
Beyond Good & Evil2ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရှာဖွေပါ။ သတင်းအချက်အလက်ထက်ပိုအသုံးဝင်တဲ့လက်နက်မရှိဘူး။ အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားရန်ဗွီဒီယိုဂိမ်းသည်သင်ပစ်မှတ်ထားသောကိရိယာများဖြစ်သည့်အတွက်စိတ်ကိုထားပါကပြဿနာများကိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏နည်းဗျူဟာများကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ ပိုပြီးနေစဉ် မဟာဗျူဟာများ သင်စမ်းသပ်လေလေ၊ အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်စေမည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်လေလေဖြစ်သည်။
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ချိန်ညှိချက်များအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပါ။ မင်းအတွက်ကစားရတာပိုလွယ်ကူစေမယ့် resolution၊ ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ setting အားလုံးကိုချိန်ညှိပါ။ ထိန်းချုပ်မှုများစီစဉ်ပေးခြင်းသည်ဂိမ်းများကိုကစားနေစဉ်ကာလအတွင်းပိုမိုထိရောက်သောရလဒ်များရရှိရန်သင်၏သက်တောင့်သက်သာအဆင့်၌ကစားရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုပေးသည်။
Beyond Good & Evil2ကိုသင်ကြိုးစားနိုင်သောပုံစံများ
Beyond Good & Evil2၏ဗားရှင်းအသစ်သည်သင် Console ကိုနှစ်သက်သူ (သို့) PC ကိုနှစ်သက်သူဖြစ်လျှင်အရသာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသည်။ မတူညီသောပုံစံများဖြင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုသင်ကြိုးစားနိုင်လိမ့်မည်။ console အတွက်တော့ရနိုင်ပါတယ် PlayStation, Xbox အခြားသူများအကြားသင့်အားအိမ်၌ကြိုးစားရန်သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမှအခြားကစားသမားများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ.
ဒါပေမယ့်သင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် တိမ်တိုက်ထဲမှာကစား ကွန်ပျူတာအတွက် Steam နှင့် Stadia ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများမှတဆင့် ဤအရာများဖြင့်သင်စျေးကွက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် console မပါဘဲသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့် features များပါ ၀ င်သော PC မပါဘဲသင်လုပ်နိုင်သည် ပျော်စရာဂိမ်းကစား.
၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးမျိုးသောဗားရှင်းအတွက်ဖြန့်ချိ ဒီဂိမ်းကဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးပရိတ်သတ်ကိုရောက်ရှိစေပြီးအခြားကစားသမားများနှင့်ကစားခြင်းသည်လက်လှမ်းမီပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။ မင်းရဲ့အရသာပေါ်မူတည်ပြီး Beyond Good & Evil2ကကမ်းလှမ်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေထဲကတစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။
အခုမင်းလိုချင်တဲ့ဗားရှင်းများစွာကိုမင်းလက်လှမ်းမမှီရင်မင်းတစ်ခုပဲဆုံးဖြတ်ရမယ်၊ စိတ်မဆိုးပါနဲ့၊ ဗားရှင်းတစ်ခုစီမှာပျော်စရာကောင်းပြီးမင်းအသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့အာမခံတယ်။ တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်နှင့်အခြားကစားသမားများနှင့်မယှဉ်နိုင်သည့်ပွဲများဖြစ်သည်.
Beyond Good & Evil2ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
သင်လုပ်နိုင်သောပထမ ဦး ဆုံးအရာ Beyond Good & Evil ၂ မင်းအိမ်နဲ့အနီးဆုံးဆိုင်ဒါမှမဟုတ်မင်းအမြဲသွားလေ့ရှိတဲ့ဆိုင်ကိုသွားရမယ်။ မင်းရဲ့ဂိမ်းဖြန့်ချိတဲ့နေ့ပြီးတဲ့နောက်နေ့တွေမှာမင်းကသူ့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအားလုံးမှာသင့်တော်တာကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Playstation (သို့) Xbox ကဲ့သို့ဂိမ်းစက်များကိုပရိသတ်အများစုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ပုံမှန်ရှိသည် အားလုံးလွှတ်၏မူရင်းဗားရှင်း.
သင့်အနီးအနားမှာဗွီဒီယိုဂိမ်းဆိုင်မရှိရင်စိတ်မပူပါနဲ့မင်းအကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုလည်း ၀ ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းစတိုးများဒါမှမဟုတ် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများသင်ဝယ်ရန်အကောင့်တစ်ခုရှိပါက။
အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်ဝယ်ပါ ၎င်းသည်အိမ်မှ ၀ ယ်ခြင်း၊ လုံခြုံစွာနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤရွေးချယ်မှုသည်သင်၏ခေါင်းစဉ်ကိုသင်၏အိမ်တံခါးသို့ရောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့မဟုတ်သင်ဆန္ဒရှိပါကသင်၏ console ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက် install လုပ်သော virtual version ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
စာရင်းပေးသွင်းထားသောဗီဒီယိုဂိမ်းပလက်ဖောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများလည်းရှိသည်။ ဤပလက်ဖောင်းများတွင်သင်သည်ပလက်ဖောင်း၏ဆာဗာများကို သုံး၍ cloud ၌တည်ရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုကို သုံး၍ ကစားနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့မင်းမှာအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိဖို့နဲ့စာရင်းပေးသွင်းခပေးရမယ်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းခြင်းသည်ကာလတိုတွင်ဆိုလိုသည် အနိမ့် outlay မူလဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုရယူခြင်းထက်၎င်းသည်သီးခြားအချိန်များစွာအတွက်ကွဲပြားသောဂိမ်းများစွာကစားရန်ကူညီပေးသည်။
Beyond Good & Evil2တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်အကြံပေးချက်အချို့
ထိုစကားထက် ပို၍ မှန်ကန်သောအရာမရှိပါ အလေ့အကျင့်မာစတာစေသည်နှင့်တစ်ခုခုတိုးတက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လေလေ၊ သင်ကျွမ်းကျင်မှုပိုရလေဖြစ်သည်။
ဤတူညီသောအယူအဆသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်လည်းထည့်တွက်သည်။ သင်ဆရာဖြစ်လိုလျှင်လေ့ကျင့်ရန်လိုသည်။ ဤသို့ဖြင့်သင်၏ ဦး နှောက်သည် Beyond Good & Evil2၏ပညတ်ချက်အတုများနှင့်ချိန်ညှိလိမ့်မည်။ ပိုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်များနှင့်မဟာဗျူဟာများဖန်တီးခြင်း။ သင်လိုချင်လျှင် Beyond Good & Evil2၌ဆရာဖြစ်ပါစေစတင်လေ့ကျင့်ပါ။
သင့်ကိုများစွာကူညီနိုင်သည့်အရာတစ်ခုရှိသည် ရန်သူရဲ့အပြုအမူကိုလေ့လာပါမရ။ ရန်သူ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခန့်မှန်းပြီးသူတို့၏နည်းပရိယာယ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်သူတို့၏အားနည်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်သင်ပိုမိုနီးစပ်လာစေနိုင်သည်။ သူ့ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတာသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မင်းလည်းလိုအပ်တယ် သင်၏ရန်သူများကိုမည်သို့ပြုမူရမည်ကိုသိသည်မရ။ သူတို့က NPCs တွေ၊ ကစားသမားအစစ်အမှန်တွေဘဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကမင်းသူတို့ကိုသင်ယူရင်သူတို့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုချေမှုန်းပစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်။
အလားတူပင် သင်၏အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေပါ သူတို့ကိုသူတို့ကိုအားဖြည့်ပေးပြီးမင်းကိုပိုသန်မာလာအောင်ကူညီလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးမင်းအခွင့်အလမ်းရှိတိုင်းသူတို့ကိုကျော်ဖြတ်ပါ။ သူတို့ကမင်းကိုအရင်ကကူညီခဲ့ရင်အရေးမကြီးပါဘူး၊ သေချာတာပေါ့၊ မင်းပိုကြီးထွားလာနိုင်တယ်။
del သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သင်ကောင်းကောင်းလုပ်သောအရာနှင့်၎င်းတို့သည်သိပ်မကျွမ်းကျင်သောအရာနှစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မကောင်းတဲ့သူတွေထဲကငါတို့ကမှတ်ချက်ပေးပြီးပြီ။ သူတို့ကိုအခွင့်ကောင်းယူပါ။ ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေဆီကသင်ယူတာကောင်းပါတယ်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းစွာကူးယူခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင်၏ကောင်းမွန်သောနေရာ၌ဆက်လက်ရှိနေရန်သင်၏မဟာဗျူဟာများနှင့်ကစားနည်းကိုချိန်ညှိခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလျင်စလိုမလုပ်ပါနဲ့၊ မင်းရဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုကောင်းကောင်းစီစဉ်ပြီးရေတိုပန်းတိုင်တွေချမှတ်ပါ။ ဒီနည်းနဲ့မင်းပန်းတိုင်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်နိုင်လိမ့်မယ်။ သင်ဤအချက်များကိုလိုက်နာပါကသင်သည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှပိုမိုနီးစပ်လာလိမ့်မည် ကောင်း & ဘေး2ထက်အကောင်းဆုံး.
သြဂုတ်လ 2, 2021 ရက်တွင် Posted
Dead Island2ဗီဒီယိုဂိမ်းလမ်းညွှန်
Dead Island2သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် ပိုပြီးပရိသတ်တွေရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်မရ။ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကစားသမားပါဝင်ခြင်းသည်၎င်း၏ပျော်စရာနည်းလမ်းသည်ကစားသူများအားပိုမိုသစ္စာရှိလာပြီး၎င်းကိုမကစားရသေးသူများကစမ်းကြည့်ချင်သည်။
Dead Island2မှအသစ်သောသူများအတွက်၊ အလွန်အသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များပါ ၀ င်သောဤလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ဤအချက်အလက်များဖြင့်သင်လုံးဝဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲကစားရန်သင်လုပ်ရမည့်အရာကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအယူအဆရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာလွှတ်တင်ယခုအချိန်တွင်ကြောင်းအများပြည်သူပြီးသားဖြစ်ပါတယ် သေလွန်သောသူတို့သည်ကျွန်း2ဖြစ်ရမယ် ဖြန့်ချိသည့်ရက်ဤအချက်အလက်များပေးသောအခါသူ၏နောက်လိုက်များသည်ပျော်ရွှင်စေနိုင်သောအခွင့်အလမ်းသစ်များကိုမည်သို့ယူဆောင်လာမည်ကိုသိရန်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။ console များ - ရရှိနိုင်ပါသည်.
Dead Island2တွင်ထင်ရှားစေရန်သိကောင်းစရာများ
ဤသူသည်သင်တို့ကိုအချို့ဖော်ပြရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ် သငျသညျအပြုသဘောရလဒ်များနှင့်အတူ Dead Island2တွင်ဂိမ်းများကိုပြုလုပ်နိုင်အောင်လှည့်ကွက်များဂိမ်းဖြန့်ချိသောအခါသင်ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းလိုက်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အဆင့်ကိုတက်: တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းသည်သင့်အတွက်တံခါးဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီးကျန်ကစားသမားများထက်အားသာချက်ကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ ဒါကမင်းတက်သွားပြီးမင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေအပြင်မင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ့်နည်းပဲ။
Dead Island2တွင်သင်သုံးနိုင်သောကိရိယာများအကြောင်းလေ့လာပါ။ သင့်ကိုခြေတစ်လှမ်းတိုးစေမယ့်အရာကဗွီဒီယိုဂိမ်းကမင်းကိုပေးတဲ့ tools တွေကိုသိခြင်းပါပဲ။ Dead Island2ကိုမင်းအတွက်ရနိုင်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုသိခြင်းအားဖြင့်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့မင်းအချိန်မီသုံးနိုင်လိမ့်မယ်။
ကစားရန်နည်းလမ်းများစွာစမ်းကြည့်ပါ - တခါတရံ ကစားနည်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကျိုးရှိသည်၊ သို့သော်ရွေးချယ်စရာအသစ်များကိုကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်နှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်ပိုကောင်းသည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ချိန်ညှိချက်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းပြောင်းလဲပါ - သတ်မှတ်ချက်များသည်သင့်အားနှစ်သိမ့်မှုပေးသောဂိမ်းများရှိခြင်းသည်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိစေသည်။ မျက်နှာပြင်နှင့်အသံဆက်တင်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်သင့်စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်မှုများစီစဉ်ပေးခြင်းသည်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။
Dead Island2ကိုသင်ကစားနိုင်သောပုံစံများ
မပါဝင်တဲ့သူမရှိဘူး။ Dead Island2ကို consoles (သို့) PC ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်နည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးကိုရအောင်လုပ်သည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုခံစားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေပေးမယ့်ဂိမ်းစက်တွေကတော့ PlayStation y Xboxဘယ်မှာကစားသမားနိုင်ပါတယ် ဒေသတွင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှအခြားကစားသမားများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကစားပါ.
ဒါပေမယ့်လည်းရရှိနိုင်ပါသည် တိမ်တိုက်ထဲမှာကစား PC ပေါ်ရှိ Steam နှင့် Stadia ကဲ့သို့သောစာမျက်နှာများမှတဆင့်။ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြု၍ စျေးကွက်ထဲတွင်နောက်ဆုံးပေါ် console သို့မဟုတ်အထူးအင်္ဂါရပ်များရှိသည့်ကွန်ပျူတာရှိရန်မလိုအပ်ပါ အလွန်ဖျော်ဖြေမှုဂိမ်းပျော်မွေ့
အလားတူပင်အခွင့်အလမ်းရှိလိမ့်မည် တိမ်တိုက်ထဲမှာကစားထို့နောက် Dead Island ကိုစမ်းသပ်ရန်အဆင့်မြင့်အဖွဲ့တစ်ခုရှိရန်မလိုပါ။ Steam နှင့် Stadia ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများအတွက်ဆာဗာများတွင်သင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ပျော်စရာဂိမ်းကစား ချက်ချင်း
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရည်မှန်းချက်ကဖြစ်နိုင်သမျှကျယ်ပြန့်တဲ့ပရိသတ်ကိုနှစ်သက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါအတွက် Dead Island2၏ကွဲပြားသောဗားရှင်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် လိုအပ်ချက်များစွာကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောအရာသည်အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်သောအခါလူတစ် ဦး စီ၏ ဦး စားပေးမှုများပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။
ဗားရှင်းတစ်ခုစီသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ရန်စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အခြားသူများကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိမည့်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံရှိသည် အဲဒါလုံခြုံတယ်
ဤနည်းလမ်းများဖြင့်သင်သည် Dead Island2ကို ၀ ယ်နိုင်သည်
မသန်စွမ်း Dead Island2ကိုရယူပါ သင်ရုံသွားဖို့ရှိသည် ကစားဆိုင် ၎င်းသည်ပိုနီးစပ်သည် (သို့) သင်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိသောသူထံသို့သွားပါ။ ဖြန့်ချိပြီးနောက်သင်၎င်း၏ပုံစံအားလုံးကိုစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်တွေ့နိုင်သည်။
ဤသည်နှင့်အတူအားလုံးအများဆုံးဘုံဖြစ်ပါတယ် consoles စများအတွက်ဂိမ်းများ PlayStation သို့မဟုတ် Xbox ကဲ့သို့ ၎င်း၏အသုံးပြုသူများသည်အလွန်အဆင်ပြေပြီးပိုင်ဆိုင်မှုကိုနှစ်သက်သည် ဂိမ်းများ၏မူရင်းဗားရှင်း.
သို့သော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုများသည်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ မင်းမှာအနီးအနားမှာဘာအဆောက်အအုံမှမရှိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းတိုက်ခန်းကမထွက်သွားချင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုဒီမှာ ၀ ယ်နိုင်တယ် အွန်လိုင်းစတိုးများသို့မဟုတ် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများ.
ဤအစတိုးဆိုင်၏အားကြီးသောအချက်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ် သင် ၀ ယ်ယူရန်သင်၏အိမ်မှမထွက်သင့်ပါမရ။ ဒီဂိမ်းကမင်းရဲ့အိမ်တံခါးနားကိုရောက်လာတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းငွေပေးချေပြီးတာနဲ့အဲဒါကို download လုပ်ပြီးချက်ချင်း install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Stadia (သို့) Steam ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများသည်လည်းငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ပြီးပါက၎င်းတို့အားဆာဗာများ သုံး၍ ပျော်မွေ့စေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုအောက်တွင်စာရင်းပေးသွင်းသည့်အခါတိုင်းသင်ကစားနိုင်သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကာလတိုတွင်ဆိုလိုသည် အနိမ့်ငွေပေးချေမှု မူလဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုရယူခြင်းထက်၎င်းသည်အချိန်များစွာအတွက်ခေါင်းစဉ်များစွာကိုအသုံးပြုရန်ကူညီပေးသည်။
Dead Island2မှာပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ငါတို့အားလုံးဟာအတွေ့အကြုံအသစ်တွေနဲ့မတွေ့ကြုံခင်တိုင်းအတွေ့အကြုံအသစ်တွေနဲ့အစပြုတယ်၊ အစကနေအရာတစ်ခုကိုကြိုးစားတာကအမြဲတမ်းမတူတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်စိတ်တည်ငြိမ်တယ်၊ အထူးကုတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။
ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေမှာလည်းအတူတူပါပဲ။ မင်းမှာအတွေ့အကြုံပိုရှိလေ၊ တုံ့ပြန်မှုပိုရလေ၊ မင်း ဦး နှောက်ရှိလေပဲ ပိုကောင်းတဲ့နည်းဗျူဟာများတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒါဆိုမင်းလိုချင်ရင် Dead Island2ကစားရန်သင်ယူသည် သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသည်းခံပြီးမကြာခဏလေ့ကျင့်ပါ။
သင်၏အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည် သင်၏ရန်သူများ၏မဟာဗျူဟာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါမရ။ ရန်သူ့လှုပ်ရှားမှုကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်သူတို့၏နည်းပရိယာယ်များကိုနားလည်ခြင်းသည်သင်၏အားနည်းသောနေရာများအားဖြေဖျောက်ရန်သင့်အားပိုမိုနီးစပ်စေနိုင်သည်။ အမှားအမှန်ကိုသင်ရှာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ မင်းလည်းလိုအပ်တယ် သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များထံမှမည်သို့ကစားရမည်ကိုလေ့လာပါမရ။ သူတို့က NPCs တွေ၊ ကစားသမားအစစ်အမှန်တွေဘဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကမင်းသူတို့ကိုသိရင်မင်းသူတို့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘယ်လိုအနိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုနဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုသုံးပါတယ်။
ရန်သူသည်မှန်သည်ကိုမှန်သည်၊ သူမှားသည်ကိုသိခြင်းအားဖြင့်သင်သူ့ထက်အားသာချက်တစ်ခုရလိမ့်မည်။ အနိုင်ရဖို့ဒီအားသာချက်ကိုအသုံးချနိုင်ဖို့မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, မင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပါ အဲဒါတွေကသူတို့ကိုအားဖြည့်ပေးပြီးမင်းကိုပိုသန်မာလာအောင်ကူညီလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုလေ့လာပြီးမင်းအခွင့်အလမ်းရှိတိုင်းသူတို့ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ သူတို့ကမင်းကိုအရင်တုန်းက ၀ န်ဆောင်မှုပေးရင်အရေးမကြီးဘူး၊ မင်းသေချာပေါက်တိုးတက်နိုင်တယ်။
del သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သူတို့ကဘယ်အရာကကောင်းတယ်၊ သူတို့ကသိပ်မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုတာကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မယ်။ မကောင်းတဲ့သူတွေအကြောင်းငါတို့ကဖော်ပြပြီးပြီ၊ သူတို့ကိုအခွင့်ကောင်းယူပါ။ ကောင်းသောအရာများသည်သင်ယူရန်ကောင်းသည်။ ဒါဟာမင်းလုပ်နေတဲ့အတိုင်းဘဲ၊ စံပြကမင်းရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့မြေပြင်မှာဆက်သွားဖို့စံပြဘဲ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရူးမလုပ်ပါနဲ့၊ မင်းရဲ့နည်းပရိယာယ်တွေကိုမှီဝဲပြီးရေတိုပန်းတိုင်တွေချမှတ်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ပန်းတိုင်များကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအောင်မြင်နိုင်မည်။ သင်ဤအချက်များကိုလိုက်နာလျှင်သင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပိုနီးစပ်လိမ့်မည် Dead Island2တွင်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခု.
Beyond Good & Evil2ကိုစတင်ခံစားရန်သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
သောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုမှာ ဒါကြောင့်ပို။ ပို။ လူကြိုက်များဖြစ်လာနေသည် Beyond Good & Evil 2. ဒီဗီဒီယိုဂိမ်းကမင်းကအစကတည်းကဘဲအရင်ကစားဖူးပြီးသားဘဲယှဉ်လို့မရတဲ့ဂိမ်းတွေကိုတီထွင်ဖို့ပျော်စရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပေးထားပါတယ်။
ထို့အပြင်သင်က Beyond Good & Evil2၌ အစပြု၍ သေချာသောအားသာချက်တစ်ခုရလိုလျှင်ဤလမ်းညွှန်ရှိအချက်အလက်များသည်အလွန်အသုံးဝင်နိုင်သည်။ ငါတို့မှာမင်းအတွက်အခုထောက်ခံချက်တွေနဲ့မင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုကူညီမယ့်အခြေခံအချက်အလက်တွေရလိမ့်မယ်
ပရိသတ်များ ကောင်းသော & ဘေးဥပဒ်2အလွန်မကြာမီအတွက်ဂိမ်း၏ Premiere လက်ခံရရှိရန်အဆင်သင့်လာပြီနေကြသည် ဖြန့်ချိသည့်ရက်သင်၌ပျော်မွေ့နိုင်သည့် console များ - ရရှိနိုင်ပါသည်မရ။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဗွီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်အတူဗွီဒီယိုဂိမ်းရောက်ရှိလာခြင်းသည်ယူဆောင်လာပေးမည့်သတင်းအားလုံးကိုခံစားနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။
Beyond Good & Evil2၌ကျော်ကြားရန်သိကောင်းစရာများ
ရှင်းနေသည်မှာ၎င်းသည်သင့်အားအချို့ပေးရမည့်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည် Beyond Good & Evil2သည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ရှိနေစဉ်မယုံနိုင်စရာဂိမ်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူစေသောလှည့်ကွက်များ။ အချို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သင်၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်ပြီးသင်၏အဆင့်ကိုမြှင့်ပါ။ တိုးတက်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းကမင်းကိုအခွင့်အလမ်းပိုပေးလိမ့်မယ်၊ မင်းကကျန်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အားသာချက်တစ်ခုရလိမ့်မယ်။ ဒါကမင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေအပြင်မင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုကျော်လွှားပြီးတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
Beyond Good & Evil2ကမင်းကိုပေးတဲ့အရာကိုရှာဖွေပါ။ တစ်ခုခုကမင်းကိုအကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်၊ အဲဒါ "သိတယ်" ဂိမ်းကိရိယာများကိုမည်သည့်အရာများနှင့်မည်သို့သုံးနိုင်ကြောင်းကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်ဂိမ်း၌ဖြစ်နိုင်သောအခက်အခဲများကိုကျော်လွှားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
ဝတ္ထုနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုပါ။ သင်လုပ်ခဲ့ရင်တောင် နည်းဗျူဟာ သင်စိတ်ကျေနပ်မှုခံစားရသည့်အတွက်အသစ်များကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားပါ၊ ၎င်းသည်သင့်အားတိုးတက်စေမည့်အသုံးဝင်သောနည်းစနစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်လိုအပ်သည့်ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းပါ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းဆက်တင်များတွင်သင်လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကစားသည့်အခါသက်တောင့်သက်သာရင်ဆိုင်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံရန်ဆက်တင်များထဲမှတစ်ခုသည်ဖြေရှင်းချက်၊ အသံ၊ ထိန်းချုပ်မှုများသို့မဟုတ်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေသောအရာနှင့်သက်ဆိုင်ပေမည်။
Beyond Good & Evil2တွင်ကစားမည့်ပလက်ဖောင်းများ
Beyond Good & Evil2၏ဗားရှင်းအသစ်သည်သင်လူတိုင်း၏ consoles ကိုနှစ်သက်သူ (သို့) PC ကိုနှစ်သက်လျှင်၊ ဂိမ်းကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးနိုင်ပါတယ်။ console အတွက်တော့ရနိုင်ပါတယ် PlayStation, Xbox အခြားသူများကသင့်အားအိမ်၌ကြိုးစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည် အခြားလူများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ.
တူညီသောလမ်းအတွက်ကြောင့်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် တိမ်တိုက်ထဲမှာကစား ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Steam နှင့် Stadia ကဲ့သို့စာမျက်နှာများကိုသုံးပါ။ ဤအရာများဖြင့်စျေးကွက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် console (သို့) ထူးခြားသောကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိရန်မလိုအပ်ပေ ပျော်စရာဂိမ်းကစားပါ
သင်ရွေးချယ်သောအရာသည်သင်၏ ဦး စားပေးနှင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်ပိုသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် Beyond Good & Evil2ကိုကွဲပြားသောဗားရှင်းများတွင်ရှာပါ။ ရှာဖွေနေတာကဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးပရိသတ်ကိုလက်လှမ်းမီဖို့နဲ့ဂိမ်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လူတိုင်းအတွက်ခံစားနိုင်အောင်ပါ။
အလားတူပင်ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီတွင်ဖျော်ဖြေရေးရွေးချယ်စရာများရှိပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည် တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေကစားသည့်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ.
Beyond Good & Evil2ကိုငါဝယ်ရမယ်၊ ငါဘယ်မှာသွားရမလဲ။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း Beyond Good & Evil ၂ မင်းအိမ်နဲ့အနီးဆုံးဆိုင်ဒါမှမဟုတ်မင်းအမြဲသွားလေ့ရှိတဲ့စတိုးဆိုင်ကိုသွားပါ။ မင်းရဲ့ဂိမ်းဖြန့်ချိမယ့်ရက်ရောက်လာပြီးတာနဲ့နောက်ရက်တွေမှာမင်းကသူ့ရဲ့ပလက်ဖောင်းတွေအားလုံးမှာရနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် consoles စများအတွက်ဂိမ်းများ PlayStation (သို့) Xbox ကဲ့သို့ အထူးသဖြင့်၊ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူတို့လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းအားဖြင့်ခံစားချက်ကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပါ သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း၏မူရင်းဗားရှင်း.
သို့သော်၊ သင်သည်၎င်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များတွင်သာမကဘဲ၎င်းကိုသင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းစတိုးများ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများ သင်ဝယ်ယူမှုလုပ်ရန်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်သည်။
Si သင်ဤအွန်လိုင်းစတိုးများတွင်ဝယ်သင်အချိန်နှင့်အလုပ်ကိုသက်သာစေပြီးသင်၏ဂိမ်းသည်သင်၏အိမ်သို့ရောက်လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်သင်က virtual version ကို ၀ ယ် ယူ၍ ၎င်းကို download လုပ်ပြီးသင်၏ console တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဗွီဒီယိုဂိမ်းစတိုးဆိုင်များအပြင်စာရင်းပေးသွင်းမှုအထုပ်တစ်ခုတွင်ကစားခြင်း၏အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသေးသည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ကဂိမ်းတစ်ခုကို ၀ ယ်ယူခြင်းမဟုတ်ဘဲသတ်မှတ်ထားသောကာလတစ်ခုအတွင်းဂိမ်းမျိုးစုံကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအရာသည် Stadia သို့မဟုတ် Steam ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကာလတိုတွင်ဆိုလိုသည် အနိမ့်ငွေပေးချေမှု မူရင်းဗွီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု ၀ ယ်ခြင်းထက်၎င်းသည်သင့်အားအချိန်အတိအကျအတွက်ခေါင်းစဉ်များစွာကိုခံစားခွင့်ပြုသည်။
Beyond Good & Evil2ကစားရန်မည်သို့လေ့လာရမည်နည်း။
lo အလေ့အကျင့်မာစတာစေသည် ဂိမ်းတွေမှာလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ သင်များများလေ့ကျင့်လေ၊ Beyond Good & Evil2၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် AI တုံ့ပြန်မှုများနှင့်သင်ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဆန္ဒရှိလျှင် Beyond Good & Evil2တွင်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေမိမိကိုယ်ကိုသည်းခံခြင်းနှင့်ကောင်းသောစေတနာဖြင့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာလေ့ကျင့်ပါ။
သင့်ရဲ့နည်းစနစ်များတိုးမြှင့်ကူညီပေးသည်ကြောင်းအခြားအရာတစ်ခုခုသည်ဖြစ်ပါတယ် သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်လေ့လာပါ။ အမှားအမှန်ကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင်လည်းလိုအပ်တယ် သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားရန်မည်သို့မည်ပုံမရ။ သူတို့က NPCs တွေ၊ ကစားသမားအစစ်အမှန်တွေဘဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကမင်းသူတို့ကိုသိရင်မင်းသူတို့ကိုဘယ်လိုအလွယ်တကူအနိုင်ယူပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုကျင့်သုံးပါတယ်။
သင်၏ပြိုင်ဘက်ကိုဆန်းစစ်သကဲ့သို့သင်လည်းလုပ်ရမည် သင့်ကိုယ်ပိုင်နည်းစနစ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ ရလဒ်များသည်သင့်အားပေးသည်။ သင်ကြီးမြတ်လျှင်ပင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်သင်သေချာပေါက်တိုးတက်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့နည်းပရိယာယ်တွေကိုနေ့ချင်းညချင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမင်းဘယ်နေရာမှာပိုကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေပါ။
အပြင် ရန်သူညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူတို့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတာသင်သတိပြုမိလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့မင်းရဲ့ quest မှာမင်းကအချိန်တိုင်းအတွက်ဘာကိုဖမ်းရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူတစ်ပါးအတွက်ဘာအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ကစားနည်းကိုပုံသွင်းဖို့မကောင်းပါဘူး။
နောက်ဆုံးတွင်အလျင်စလိုမလုပ်ဆောင်ပါနှင့်၊ သင်၏ဗျူဟာများကိုလိုက်နာပြီးရေတိုပန်းတိုင်များချမှတ်ပါ။ ဒီနည်းနဲ့မင်းပန်းတိုင်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်နိုင်လိမ့်မယ်။ သင်ဤအချက်များကိုလိုက်နာလျှင်သင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပိုနီးစပ်လိမ့်မည် ကောင်း & ဘေး2ထက်အကောင်းဆုံး.
မူပိုင်ခွင့်© 2021 · All rights reserved · AdraInformatica
90 Retro အော်ဂဲနစ်အကြောင်းအရာများ · RSS feed · လော့ဂ်